Welcome to Aayaha Nolosha » LAMAANAYAAL AAN WAXBA MAQAL OO AROOSKOODA UU KA DHACAY……..
LAMAANAYAAL AAN WAXBA MAQAL OO AROOSKOODA UU KA DHACAY……..
Magaalada Garisa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa waxaa dhowaan ka dhacay aroos nooc cusub ah oo ay ku aqal galeen lamaanayaal aan waxba maqal (dhagoolayaal) ah.
Maxamed iyo Najma ayaa labadooda is fahmeen, waxayna rajeynayaan in ay dhalaan carruur ilaa 5-7 gaaraya, halka Maxamed uu jeclaan lahaa inuu ku curto wiil kadibna gabar ugu xigsato. sidaasna saxaafadda ayuu u sheegay mar uu wareysi bixinayay caruuska
“Waalidkay ayaa aad iigu dadaalay waxna i baray, ina garab taagnaa ilaa iyo heerkan, Soomaaliduse aad bay u takooraan dhagooleyaasha guryaha ayay ku hayaan, marka waa in ay ogaadaan ahmiyadda ay leedahay in wax la baro dhagooleyaasha” ayuu yiri Maxamed oo luuqadda dhagoolayaasha adeegsanaaya.
Wuxuu sheegay in uu carruurtiisa jeclaan doono haddii ay dhagooleyaal noqdaan iyo haddii kalaba.
Cabdixamiid Sheekh Xasan Shiil oo ah aabaha carruuska ayaa sheegay in uu dhalay saddex wiil iyo labo gabdhood isla markaasna aysan dhammaantood waxba maqlin sidoo kalana aysan hadlin.
Cabdixamiid wuxuu sheegay in labadii gabdhood laga guursaday, Maxamedna uu soo calmaday gabar sidiisa oo kale aan waxba maqlin isla markaasna hadlin waana ku taageeray oo aroos laga sheekeeyo oo qarash fara badan uu igaga baxay ayaan u dhigay si aysan isu ciil kaambin” ayuu yiri.